Nolol maalmeedka, sidee baa loo ilaaliyaa boorsooyinka? - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Warka Warshadaha > Nolol maalmeedka, sidee baa loo ilaaliyaa boorsooyinka?
Nolol maalmeedka, sidee baa loo ilaaliyaa boorsooyinka?
Isticmaalka iyo dayactirka bacda:
1. Marka bacda maqaarka xayawaanka aan la isticmaalin, waa in lagu keydiyaa bac cudbi ah, oo aan lagu keydin bac, maxaa yeelay hawada bacda ku jirta lama dhex wareejiyo, taas oo sababi doonta in bacda ay qalasho oo ay waxyeelo gaarto. Boorsada ku xardho warqad jilicsan oo jilicsan ama joornaal si aad u haysatid qaabka bacda Haddii uusan jirin boorso maro ku habboon, barkimooyinka hore ee barkimadu sidoo kale way habboon yihiin.
2. Isticmaal bac isku mid ah maalin kasta, way fududahay inaad ku keento dabacsanaanta maqaarku daal, markaa dhawr bac oo maqaar ah ayaa loo beddeli karaa mid kale.
3. Ha u isticmaalin biyo qoyan maqaarka barafoobay, isticmaal caag cayriin ah si aad u tirtirto ama u isticmaasho alaab gaar ah nadaafadda iyo daryeelka. Haddii bacda maqaarku qoyso, waxaad isticmaali kartaa tuwaal qalalan si aad u nuugto qoyaanka, ka dibna ku dheji joornaalka ama warqadda musqusha nadiif ah bacda maqaarka, kuna kaydi meel qabow oo hawo leh si ay hawadu u qalasho. Ha u dhigin qorraxda si toos ah, taas oo ka dhigi doonta bacda inay libdho, Isbedeshay.
4. Waa in taxaddar la yeesho si loo ilaaliyo dhammaan qalabka birta lagu xidho. Qoyaanka iyo jawiga milixda badan ayaa sababi kara oksaydh.
5. Ku hay qalalan oo ku kaydi meel qabow oo hawo leh.
6. Ka fogow soo-gaadhista qorraxda, gubashada dabka, biyo maydhista, saamaynta shayga fiiqan iyo taabashada dareeraha kiimikada.
Dayactirka iyo daryeelka caadiga ah ee maalinlaha ah:
Ka-hortag boodhka: Si looga fogaado inaad noqoto "bacda ciidda", si joogto ah u tirtir oo si joogto ah u ilaali.
Ka fogow barafowga ama kuleylka: Boorsooyin badan ayaa qallajin doona oo dillaaci doona marka farqiga heer kulka uu aad u weynaado. Xaaladda heerkulka sare iyo iftiinka qoraxda tooska ah, saliida geesku way dhalaali doontaa, way dhici doontaa, wayna qallajin doontaa.
Talooyin ku saabsan dayactirka boorsooyinka maqaarka:
1. Ha buux dhaafin bacda maqaarka si aad uga fogaato cillada maqaarka. Isla mar ahaantaana, waa in laga ilaaliyaa aashitada, alkaliska iyo qoyaanka. Si looga hortago suurtagalnimada in wasakhda bacda maqaarku.
2. Ha u bandhigin bacda maqaarka qorraxda ama ha shidin si aad uga fogaato gabowg dhaqso ah, sii yaraanaya ama xitaa maqaarka dillaaca.
3. Bacaha maqaarka ee midabka khafiifka ahi waa inay isku dayaan inay ka fogaadaan taabashada dharka midabbada leh ama waxyaabaha kale.
4. Boorsooyinka maqaarku badanaa waa jilicsan yihiin waana sahlan tahay in la xoqo. U fiirso xagashada. Isla mar ahaantaana, si taxaddar leh u ilaali dhammaan qalabka iyo jiinyeerrada si aad uga fogaato calaamadaha oksaydhka iyo miridhyada.
5. Boorsooyinku waa nooc kale oo walax firfircoon ah. Haddii isla bacda maqaarka la isticmaalo maalin kasta, way fududahay in sababaha dabacsanaanta kiliyaha ay u keento daal, sidaas darteed waa inay jiraan dhowr is-dhexgal loo adeegsado.
6. Haddii aad u baahato boorso maqaar oo aan la isticmaali doonin muddo dheer, waa inaad ku riddaa qaddarka saxda ah ee wargeys duug ah oo nadiif ah ama dhar duug ah gudaha alaabta maqaarka, waana inaad awood u leedahay inaad dhigatid xirmooyin yar oo huffan-caddeyn ah kuul si looga hortago in alaabada maqaarku ay xumaato;
7. Markuu roob da'o, bacda waa in lagu tirtiraa qalalan waqtiga oo la dhigaa meel hawo leh si loo qalajiyo waqtiga si looga hortago caaryada.
8. Markay bacda maqaarku caaryato, isticmaal maro jilicsan oo aad ku tirtirto wasakhda biyaha iyo caaryada, oo ku rid qaar ka mid ah joornaalada, joornaalada iyo waxyaabo kale gudaha si aad ugu qalajiso hooska, ha u dhigin qorraxda si toos ah, waxay ka dhigi doontaa boorsada aad ugu jeceshahay inay libdho, Isbedelay. Ka dib ku dalbo nuur khaas ah alaabta maqaarka.
9. Maxaa la sameeyaa haddii bacdu madoobaato, marka hore ku tirtir meesha wasakhda leh cadayga, ka dibna ku tirtir cadayga maro jilicsan. Dad badan ayaa isticmaala saliida dabaysha si ay uga saaraan (bacaha madow ayaa lagula talinayaa). Runtii waa hab wax ku ool ah. Laakiin saaxiiboow, fadlan xusuusnow in Fengyoujing uu cagaar yahay. Kahor intaadan tirtirin, waa inaad ka fekertaa inay wasakheyn doonto haddii aad bacda ku masaxdo Fengyoujing.
Fiiro gaar ah:Markaad nadiifinaysid boorsada maqaarka, ha ku maydhin biyo ama ha ku taabanin dareeraha kiimikada. Biyaha way adkeyn doonaan maqaarka jawaanka, baatroolna wuu uumi bixi doonaa oo maqaarka ayuu dilaaci doonaa.
Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.waxaa la aasaasay 2005. Waxay si dhow ula socotaa isbeddelka horumarka warshadaha iyo sannadaha maaraynta xoogga leh. Waxaa loo sameeyay shirkad dhammaystiran oo isku dhafan R&D, qaabeynta, soo saaridda iyo iibinta boorsooyinka iyo boorsooyinka. Mid ka mid ah shirkadaha miisaanka u leh warshadaha bagaashka. Waxay ka korortay dhowr iyo toban qof bilowgii aasaaskeeda waxayna noqotay shirkad weyn oo bagaashka qaada oo ka badan kun shaqaale, aag dhisme ka badan 80,000 mitir murabac ah, iyo wax soo saar sanadle ah oo gaaraya 6 milyan.
Hore:Boorsada qorraxda: waa inuu lahaadaa farshaxanka safarka